Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad daryeel ah ka hor intaadan bedelay wadid aad u adag
Drive A adag yahay dukaanka computer ee xogta sida waxa uu leeyahay oo dhan xogta looga baahan yahay hawlaha caadiga ah ee aad computer iyo sidoo kale macluumaadka aad laga yaabaa in ay intaa ku kaydsan ku yaal sida music, sawiro iyo videos. Ka hor inta bedelay drive adag, xogta oo dhan waxaa loo baahan doonaa in la meel taageeray ama haddii mar hore aad ku soo dhigay hayaan waxaad u baahan doontaa inaad u guurto hayaan, kuwaas oo meesha ka duwan jirka halkii iyaga loo oggolaado sii joogo drive isla adag. Haddii si kastaba ha ahaatee, aad tahay dhibane u ahaa baabuur ku guuldareystay adag oo u baahan inuu ka soo kabsado xogta aad, waad isticmaali kartaa qalabka sida Wondershare Data Recovery, Recuva iyo kormeeraha PC iwm si ay u soo ceshano xogta oo dhan in aad u. Marka aad sameeyey hubiyo in dhammaan xogta waxtar leh ayaa la helay iyo nabdoon tahay, waxaad sii wadi kartaa habka adag bedelka drive.
Doorashada drive cusub adag
Noocyada Data iyo Power Xire
Drive cusub ee adag in aad ku talajirto in gadashada waa in ay xogta la mid ah iyo noocyada isku xira awoodda sida kuwa aad hore si loo lifaaqi karaa si aad u computer ama laptop. Gadashada mid la noocyada kala duwan ee xirayaasha abuuro kaliya doonaa daadsanaanta weyn aad iyo aad u baahan tahay waxaa laga yaabaa inay ku bedesho mid ka mid ah in dib on.
Capacity, Speed ​​iyo isku halaynta
Saddex ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee waa in maskaxda lagu hayaa marka aad gadaneyso baabuur cusub adag tahay awoodda, xawaaraha iyo isku halaynta. Waxaa jira tiro balaadhan oo ah fursadaha uu ka soo xusho, laakiin waa in aad ka iibsan taasi waa mid ku haboon baahidaada. Haddii tusaale ahaan, awood ma aha walaac weyn laakiin aan aad u gaysan kartaa xawaaraha iyo isku halaynta, iibsan drive adag in tiraan doonaa in aad u baahan tahay si degdeg ah xawaaraha wareejinta xogta iyo isku halaynta.
Hagaha bedeli drive adag ee PC
Ka fuji aad processor ka monitor iyo aaladaha kale ee ka baxsan oo ay ka ay ka soo jeedaan gelanayo qaadan wax xirayaasha korontada. Fur ay dhacdo processor by iskuruuga boolal ama riixaya dusiyey haddii processor waa aan boolal.
Meel ku wadid aad u adag oo la aqoonsado, xirayaasha ah. Ka fuji xirayaasha ka xidhiidhada aad si taxadar leh.
Deedna u tabaaxay loo isticmaalay in lifaaq drive ay adag tahay in la qafis gudaha kiiska kombiyuutarka. Isticmaal gacantaada si uu u qabto drive ay adag tahay in kiiska ma jiraan wax kale oo taageero si ay u joojiyaan kufid ahayn u tabaaxay.
Slide drive ka adag oo ka mid qafis ka dibna uma simbiriirixan ee drive cusub adag. Si taxaddar leh u tabaaxay dib ugu soo laabtay iyo soo lifaaq xirayaasha in ay xiriir ay ka soo jeedaan. Kiiska Saar dib isticmaalaya boolal ama irrid.
Hagaha bedeli drive adag on Laptop (daaqadaha)
Dami aad laptop iyo saaro baytari mar laptop waa off. Isticmaalka darawalka fur ah, ka saar boolal haysta iyo gacanka drive adag. Waxaad ka helaysaa gacanka drive adag ay raadinayaan icon sixitaanka iyo gacanka.
Haddii drive adag ku xiran gaari baraf ah, ka saar boolal la haysta gaari baraf ka dibna uma simbiriirixan drive adag ka soo baxay. Haddii drive adag loo helo in laptop laftiisa si kastaba ha ahaatee, ka fur u tabaaxay u haya ka dibna baabuur ku adag qaataan. Is ogow sida ay u yeelin mid ka mid ah xiriiriyaasha ah.
Dhig drive cusub adag galay booska ka tagay madhan by mid ka mid ah jirka. Waxaa Slide dib ugu haddii aad oo ininka mid ka mid ah la soo dhaafay ka baxo ama u soo laabtay booska ka dhigo oo tidcan boolal haddii mid hore ayaa ku lifaaqan jirka ah ee mishiinka. Siyaabood, drive cusub ee adag waa qoryo beroosh ah in si sax ah ee gacanka drive adag iyo xirayaasha waa in si sax ah ku xiran.
Albaabka adag bay drive dib rid oo ku soo lifaaq la boolal.
Hagaha bedeli drive adag ee Mac (MacBook iyo iMac)
Bedelaadda adag wadato Mac
Flip aad Mac oo dhan ka saaraan tabaaxay lifaaqaya guddiga dib ugu jirka ah ee mashiinka ka. Ka qaad guddiga dib iyo gudaha eegno wanaagsan.
Hel drive adag gudaha Mac ah. Sawirka kor ku xusan, waxa ay ku taalaa geeska hoose ee bidixda iyo waxaa booska 4 boolal. Ka fuji boolal haysta hoos drive ay adag tahay in meel la isticmaalayo darawalka fur ah. Waxaa Dami ka xidhiidhada iyo saarto posts dhinaca drive adag.
Qaado drive cusub adag oo furaysto in si xirayaasha in drive hore u adag ayaa waxaa horay u xiran oo u xir meel. Hubi in ay si fiican u fadhiyaa oo waxba ka mid ah si. Celi daboolka dhabarka oo scree ku soo laabtay booskiisa.
Bedelaadda adag wadato iMac
iMacs yihiin gaar ahaan ay adag tahay in lagu furo baqdin ay compactness iyo taxadir. Haddii si kastaba ha ahaatee, aad ka go'an in ay bedeli drive ay ku adag tahay mid ka mid naftaada, sii iyo RAAC TILMAAMAHAN:
Hel oo ka saar booska RAM ah.
Saar dhalada ee la isticmaalayo ul ku qalab.
Saar jir qaadidda dhammaan boolal dhinaca hore ee iMac ah.
Saar shaashadda by hore sifaynta boolal iyo markaas un-deeruhu oo dhan isku xirnaanta mishiinka si shaashadda.
Hel disk adag iyo saaro xirayaasha Sata iyo awood. Un-furaysto oo dhan xidhiidhada kale oo lacag la'aan ah disk adag adigoo riixaya riixo madow Jaha ee drive uu kaa. Hadda meel disk cusub adag in ay meel, korto waxaa dib, oo ku lifaaq oo dhan xirayaasha iyo boolal.
Si taxaddar leh u dhigo dib shaashadda, jir ah, dhalooyinka iyo booska ROM iyo aad ku fiican tahay inuu tago.
Waxa aad u baahan tahay inaad samayso ka dib markii uu bedelay aad disk adag
Baarista baabuur cusub oo ay adag tahay had iyo jeer waa hab fiican oo in la ogaado haddii drive adag u yimid qaar ka mid ah qalad in ma cadda sababaha qaar ka mid ah. Habkan waxaad u soo celin kartaa si aad iibiya iyo aad u hesho bedelkiisa caafimaad ma si leeyihiin aad u xanuunsataan ka dib on. Si loo eego drive adag, wax fudud in la sameeyo waxay noqon lahayd inaad nuqul ka badan oo data, waxa uu ka dibna nuqul meel oo kala duwan oo xog dib. Macluumaadka waa in uu si ballaaran drive ay adag tahay in si sax ah loo baari karaa. U fiirso heerkulka drive adag marka ay taabtaan guddiga dambe ee aad laptop ka dib markii ay muddo ku dhow hal saac. Hubi buuqa ama ilamaha. Haddii wax u muuqataa in ay cajiib ah, dhibaatada si dhakhso ah in iibiyaha.
Habka ugu fiican in la soo celiyo xogta ka bixisaa Hard Drive
Windows Vista Hard Drive Recovery: Data System iyo Soo-kabashada
kabashada drive adag San Diego
> Resource > Hard Drive > Hagaha kama dambaysta ah si ay ugu bedesho wadid aad u adag